म पनि रमाइलो गरिरहन्छु - गाईजात्रा - प्रकाशितः भाद्र ११, २०७५ - साप्ताहिक
म पनि रमाइलो गरिरहन्छु
लक्ष्मी भण्डारी, श्रीमती किशोर भण्डारी डिट्ठा सॉब
२०६० सालमा किशोर भण्डारीसँग विवाह गर्दा नुवाकोटकी लक्ष्मीले सोचेकी पनि थिइनन् कि कुनै बेला डिट्ठिनी हौंली भन्ने । त्यतिबेला किशोरकी श्रीमती भनेर बोलाउने छरछिमेकी अहिले डिट्ठिनी सा’ब भनेर बोलाउँछन्, तर उनको डिट्ठिनी पद न उनको पेसासँग जोडिएको छ, न त श्रीमान् डिट्ठा भएर उनी डिट्ठनी भएकी हुन् । हास्य टेली चलचित्र डिट्ठासा’बका प्रमुख कलाकार किशोर भण्डारीकी श्रीमती लक्ष्मीले गाउँकी डिट्ठनीको पगरी पाएकी छिन् । यद्यपि उनलाई अहिले यही पगरी प्यारो भएको छ । उनले कहीं–कतै कल्पना गरेकी थिइनन्, आफ्नो श्रीमान् देशकै यति चर्चित कलाकार होलान् भन्ने ।
एसएलसीसम्म पढेकी लक्ष्मी र प्लस टु गरेका किशोरको विवाह भने आफन्तहरूको सहयोगमा भएको हो । मागी विवाह गरे पनि दुवै जना खुलस्त कुरा गर्ने र हँसीमज्जा, ठट्टा मन पराउने हुँदा सहजै एकले अर्कालाई बुझेको लक्ष्मी बताउँछिन् ।
लक्ष्मी र किशोरको विवाह हुँदा किशोर नृत्य सिकाउँथे । त्यतिबेला घरखर्च चलाउन पनि धौ–धौ भएको लक्ष्मीलाई अझै सम्झना छ, तर पछिल्ला १०/१२ वर्ष देखि भने सहज हुँदै आएको छ । त्यसो त अहिले लक्ष्मी किशोरको पोस्ट प्रोडक्सनको सबै बन्दोबस्त मिलाउँछिन् । ‘दुवै जनाले कहाँ घर छोड्न मिल्छ र ।’ लक्ष्मी भन्छिन् ‘अनि घरमा बूढा बा–आमा हुनुहुन्छ, छोराहरूलाई पनि समय दिनुपर्‍यो ।’
कामको व्यस्ततामा दुई–तीन दिनमा घर पुग्ने डिट्ठासा’ब टेलिभिजनको पर्दामा जसरी दर्शक हँसाउन मरिहत्ते गर्छन् त्यसैगरी अर्धाङ्गिनीलाई पनि हँसाइरहन्छन् । ‘म पनि रौसे छु, उहाँको त कामै हँसाउने हो,’ लक्ष्मी भन्छिन्, ‘ढाँटेको भन्नुहोला, म झूटो बोल्न जान्दिनँ, आजसम्म एकपटक पनि झगडा परेको छैन ।’ घर–परिवार चलाउने रकमको जोहो किशोरले नै गर्छन् । हप्ताको कति जोहो गर्दिन्छन् त किशोरले ? प्रश्न भुइँमा नपर्दै लक्ष्मी भन्छिन्, ‘घर खर्चको कुरा पनि के गर्नु ? चाहियो भनेपछि दिनुभएकै छ ।’ दिने मात्र होइन, आवश्यक परेका बेला उल्टै लक्ष्मीसँग पनि खर्च माग्छन् किशोरले ।
प्रकाशित :भाद्र ११, २०७५
जाडोमा के गर्दा सबैभन्दा रमाइलो हुन्छ ?